Telegram wuxuu hagaajinayaa dib u soo celinta maqalka qaabkeeda cusub | Androidsis
Telegram si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa leh dhammaan noocyada astaamaha cusub. Codsiga farriinta wuxuu nooga tagayaa nooc cusub, halka aan ka helno isbedel weyn oo ku saabsan maqalka maqalka. Isbeddel ka caawin doona adeegsadaha inuu la kulmo macno ahaan inuu noqdo mid aad ugu wanaagsan dhammaan adeegsadayaasha.
Labada loo maqli karo codka sida podcasts-ka oo lagu hagaajiyo Telegram. Waxay na siinayaan xoogaa xulashooyin dheeri ah, oo noo oggolaanaya inaan xakameyn weyn ku yeelanno taranka la sheegay, si ay waayo-aragnimadu u noqoto tan ugu wanaagsan ee suurtagal ah mar walba. Wax badan ayaan kaaga sheegi doonaa shaqooyinkan cusub.
Tusaale ahaan, marka aan ku ciyaareyno cod ama podcast Telegram, haddii aan ka baxno arjiga oo aan mar dambe ku laabanno, waxay ku sii nagaan doontaa meeshii aan uga tagnay. Isbeddel muhiim ah, oo naga badbaadiya inaan xusuusanno oo aan raadino daqiiqaddaas dambe. Tani waa wax ay isticmaaleyaal badani filayeen horeyba arjiga.
Dhinaca kale, suurtagalnimada wax ka beddelo xawaaraha loo maqli karo illaa laba laab xawaare. Dhageysi kasta oo naloogu soo diro arjiga waxaa lagu dhejin karaa laba jeer sida ugu dhakhsaha badan. Marka tani waa wax runtii xiiso u leh isticmaaleyaal badan.
Intaa waxaa dheer, waxaa na la siiyay suurtagalnimada ka raadi walxaha ama faylasha galka hadda jira markaan rabno inaan ku soo lifaaqno muusig ama feyl guud ahaan wadahadal ku saabsan Telegram. Waxay u fududeyneysaa adeegsadayaasha inay soo diraan feyl, maadaama ay qaadaneyso waqti yar kiiskan.
Astaamahan horay ayaa loo sii daayay ee nooca cusub ee Telegram, oo aan hadda kala soo degsan karno Play Store. Haddii aad isticmaasho arjiga, cusbooneysiinta ayaa horeyba looga heli karaa labada Android iyo iOS. Sideed u aragtaa horumarkan aan ka helno arjiga fariinta?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Telegram wuxuu hagaajiyaa taranka maqalka ee cusbooneysiintiisa